सर्वा्िधक नाफा कमाउँदै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक - Gaule Media ::
Home/अर्थ खबर/सर्वा्िधक नाफा कमाउँदै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक
Gaule Media२ भाद्र २०७६, सोमबार ०२:०४
निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी बैंकहरु सेवा र पर्फमेन्सको हिसाबले पडाडि हुन्छन् भन्ने आम बुझाइलाई तोड्दै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले खुद ब्याज आम्दानी मात्रै १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सरकारी बैंक प्रतिष्पर्धामा जान सक्दैनन भन्ने आम बुझाइलाई तोड्दै नेपालका बैंकिङ क्षेत्रहरुमध्येकै अब्बल बनेर उदाहरण पेश गरेको बताए । यसका लागि धेरै मेहनत गरेको भन्दै सिइओ श्रेष्ठले भने –‘यसका लागि हामीले हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई उच्चतम सदुपयोग ग¥यौं, व्यवसायलाई विस्तार गर्यौ र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्यौं ।’ भौगोलिक हिसाबले विकटदेखि सुगमसम्म देशका ७७ वटै जिल्लामा २२३ शाखामार्फत बैंकिङ सेवा दिइरहेको भन्दै उहाँले कर्मचारीको उत्पादकत्व क्षमतामा बृद्घि गर्नुका साथै निष्कृय कर्जालाई पनि घटाइएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले छुट्याएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएर लगानी गरिरहेको बताउँदै सिइओ श्रेष्ठले भने –‘बजेट भाषणमा सरकारले निधारण गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नेपालमै रहेका वाणिज्य बैंकहरुकै ५० प्रतिशत लगानी हामीले गरेका छौं ।’
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचका साथै उत्पादकत्व बृद्घि गर्नका लागि बैंकले साना तथा घरेलु उद्योगीहरुको छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमीहरुका विभिन्न संघरसंस्थासँग सम्झौता गरेरै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बाणिज्य बैंक अरु बैंकभन्दा निक्षेप संकलन र ऋण लगानीमा आक्रामक देखिएको छ । सर्वसारधाण तर्फको निक्षेप एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो । पूँजीकोष अनुपात १३.२० प्रतिशत रहेको बैंकले खराब कर्जा ४.७५ प्रतिशतबाट ३.९० प्रतिशतमा झारेको छ । आधार व्याजदर थप ६.२० प्रतिशतबाट ५.५० प्रतिशतमा झारेको छ । केन्द्रिय बैंकको निर्देशन अनुसार स्प्रेददर झार्न खोजे पनि अझै राष्ट्र बैंकले दिएको सिलिङ भन्दा थोरै मात्रै माथि रहेको बैंकले स्प्रेडदरलाई पनि ४.९५ प्रतिशतबाट ४.४६ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
बैंकले अनुमानित एक अर्ब ७६ करोड कर प्रयोजनका लागि छुट्याएको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ५९.१७ प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षमा ४२.१९ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै कुल ऋण अनुपात ७२.७८ प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षमा ६७.९ प्रतिशत रहेको थियो । कृषि विकास बैंक दोस्रो नाफा कमाउने वाणिज्य बैंककै पंक्तिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछि अर्को सरकारी स्वामित्वको बैंक कृषि विकास बैंक दोस्रोमा रहेको छ । तेस्रोमा मात्रै निजीक्षेत्रको तर्फबाट नबिल बैंक परेको छ । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म २६ ले गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । तीमध्ये नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको मात्रै नाफा घटेको छ । त्यस्तै, रू. २ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकहरूको संख्या १८ पुगेको छ । कृषि विकास बैंकले गत आवमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ दशमलव १५ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
खराब कर्जा घटाई २ दशमलव ९० प्रतिशतमा झार्न सफल भएको र स्प्रेडदरलाई व्यवस्थापन गरेका कारण मुनाफा छ । बैंकका अनुसार बचत खाताको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बद्धि तथा कर्जाको ब्याजदर समेत डेढ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा घटाइएकोले करीब २० प्रतिशत बढी नाफा कमाउन सफल भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत स्प्रेड दरको गणना विधि परिमार्जन गरेअनुसार अहिले नै लागू गर्ने हो भने बैंकको करीब २२ प्रतिशत नाफा घट्न सक्छ । यस्तै, बढी नाफा कमाउने बैंकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको नविलले गत आवमा रू। ४ अर्ब २९ करोड नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ७ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढी हो । तर, चौंथो स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४र७५ मा रू. ३ अर्ब ६५ करोड नाफा कमाउन सफल इन्भेष्टमेन्टको गत आवमा नाफा रू। ३ अर्ब ४१ करोड रह्यो । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम नाफा सेन्चुरी बैंकको छ । २०७४र७५ मा रू. ९१ करोड २२ लाख नाफा कमाएको सेन्चुरीको नाफा गत आवमा घटेर रू. ८६ करोड ८ लाखमा खुम्चिएको छ ।